नोबेलका विद्यार्थीको प्रश्न: हामीलाई २१ लाख जरिवाना र साढे पाँच वर्ष कैद सजाय किन? :: राजु अधिकारी :: Setopati
नोबेलका विद्यार्थीको प्रश्न: हामीलाई २१ लाख जरिवाना र साढे पाँच वर्ष कैद सजाय किन?
‘नमस्कार, हामी नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगरका विद्यार्थी,’ आइतबार बिहान अस्पतालको गेटैमा भेटिएका एक हुल विद्यार्थीको भीडबाट अघि सरेर एक जना विद्यार्थीले भने ‘ऐनमा भएकै कुरा माग्दा पनि किन कलेजले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने?’
थपे, ‘चिकित्सा शिक्षा पढ्ने सोच बनाउनु नै यति ठूलो अपराध हो? जसका लागि हामीलाई नोबेलले २१ लाख जरिवाना र साढे पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ! के हामी यो देशका नागरिक होइनौं? हाम्रो मर्म कसले बुझ्ने?’
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा साढे चार लाखभन्दा बढी रकम आफूहरूसित असुल्ने नोबेलको कदमको विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थी आयोगको नियमभन्दा बाहिर कोही जानै नहुने बताइरहेका छन्। त्यसैले घरबाट धाउन सक्नेहरू, डेरामा बस्न खोज्नेहरू होस्टलमा बस्न मानिरहेका छैनन्। तर, होस्टल अनिवार्य भन्दै आएको नोबेलले अतिरिक्त शुल्क पनि नछाड्ने र पैसा पनि असुल्ने नीति लिएपछि विद्यार्थीले त्यसको तुलना जेलसँग गरेका हुन्।
कलेजले अहिले मागेको साढे चार लाख बढी रुपैयाँ तिर्दै जाने हो भने पढाइ पूरा होउन्जेले २१ लाख पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पूर्वसहमति विपरीत आइतबार नोबेल प्रशासनले अधिकांश विद्यार्थीलाई बाहिरै राखेर कक्षा चलाउँदै गर्दा विरोधका लागि यी विद्यार्थी गेटमा भेला भएका थिए। बिहीबार मोरङ प्रशासनसँगको छलफलमा नोबेलले दुई बुँदे सहमति गरेको थियो। जसको पहिलो बुँदामा अतिरिक्त शुल्क नलिने र दोस्रो बुँदामा विवाद साम्य नभएसम्म कक्षा नचलाउने उल्लेख थियो।
प्रशासनका अघि यस्तो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर फर्केको नोबेलले शुक्रबारबाटै विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्कका लागि फेरि ताकेता सुरू गरेको थियो।
‘बिहीबार प्रशासनको रोहबरमा भएको छलफलमा कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिने भनेको नोबेलले शुक्रबार फोन गरेर ताकेता गरेको छ,’ एमबिबिएस प्रथम वर्षमा छोरी भर्ना गराएका विराटनगरका एक अभिभावकले भने, ‘हाकाहाकी उता जे सहमति भए पनि हुँदै गर्छ, तपाईंहरूले पैसा नबुझाउने भए तपाईंको विद्यार्थीले कक्षामा प्रवेश पाउने छैन भन्छ। यो त सिधा डकैती भएन?’
शुक्रबार मात्रै बुबाको फोनमा यस्तो धम्की सुनेकी उनकी छोरी आइतबार साथीहरूले बोलाएपछि कलेज पुगिन्। जहाँ कलेजले एक सय जनामध्ये करिब २० जनालाई धमाधम पढाइरहेको थियो। उनीहरूले त्यसो गर्न नपाइने भन्दै विरोध सुरू गरे। एकैछिनमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थी पनि नोबेल परिसर पुगे। उनीहरूले कक्षा रोक्न वा सबैलाई प्रवेश दिन माग गरे। तर, एक्कासी विद्यार्थी समूहमाथि ढुंगा प्रहार भएपछि झडप सुरू भइहाल्यो।
‘हामी विद्यार्थीहरूलाई विभेद गर्न पाइन्न भन्दै सम्झाउँदै थियौं,’ विद्यार्थी नेता निर्मल भण्डारीले भने, ‘एक्कासी सुरक्षा गार्डको दिशाबाट ढुंगा हानियो। दुई जना विद्यार्थी घाइते भए।’
नोबेल परिसरमा गएको साता पनि यस्तै झडप भएको थियो।
सरकारलाई अतिरिक्त शुल्क नलिने जवाफ दिने तर त्यो शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कक्षामा प्रवेशै नदिने नोबेल मेडिकल कलेजको अड्डीले बारम्बार तनाव उत्पन्न गराउँदै आएको छ। यतिबेला पनि नोबेल परिसर तनावग्रस्त नै छ।
नोबेल अस्पतालका सञ्चालक डाक्टर सुनिल शर्माले केही दिनअघि मात्रै टेलिभिजनहरूलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा अतिरिक्त शुल्क नलिइएको र नियमले पाउने मात्रै लिइएको दाबी गरेका थिए। सरकारसँग र सार्वजनिक रूपमा एउटा कुरा भन्ने तर विद्यार्थी र अभिभावकसँग अर्कै व्यवहार गर्ने उनको र कलेजको दोहोरो शैलीको मारमा अभिभावक र विद्यार्थी परेका छन्।
विद्यार्थी र अभिभावक कति त्रस्त छन् भने उनीहरू सार्वजनिक रूपमा नोबेलविरूद्ध बोल्नै मान्दैनन्।
‘मैले सञ्चय कोषको रकम निकालेर र ऋण काढेर छोरीलाई एमबिबिएस भर्ना गराएको छु,’ सरकारी कर्मचारी रहेका ती अभिभावकले भने, ‘नोबेल सञ्चालकको दादागिरी र सिधा डकैती शैली गर्दा राज्य केही गर्दैन भने भोलि मेरी छोरीको भविष्य र पढाइमा तल माथि गर्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ?’
सेतोपाटीसँग लामो कुराकानी गर्दा उनलाई अन्य अभिभावकले तारान्तार फोन गरिरहेका थिए। भर्खरै कलेजले फोन गरेर धम्क्याएको सुनाइरहेका थिए।
‘पैसा तिरेर नानीहरू पढाउन खोज्दा यति दुःख पाइँदो रहेछ,’ उनी फोनमा भन्दै थिए, ‘सरकारलाई मेडिकल माफियाले फनफनी पार्दा रहेछन्।’
उनले भनिरहेको दृश्य आइतबार दिउँसो नोबेल परिसरमा व्यवहारतः प्रमाणित हुँदैथियो। प्रशासनसँग गरेको सहमति लत्याएर नोबेलले अतिरिक्त पैसा बुझाउनेलाई कक्षामा पढाउँदै थियो। अरू विद्यार्थी सदाझैं बाहिर आन्दोलनमै थिए।
१४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बुझाएर एमबिबिएस प्रथम वर्षमा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग नोबेलले विभिन्न शीर्षकमा साढे ४ लाखभन्दा बढी रकम असुल्न खोजिरहेको छ। यसपटक नोबेलमा एक सय जना विद्यार्थी एमबिबिएसमा भर्ना भएका छन्। विद्यार्थी र अभिभावकहरू भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोबाहेक कुनै पनि शुल्क नबुझाउने अडानमा छन्।
नोबेलले एमबीबीएस भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नसीपबापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कबापत ९८ हजार र होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार लगायतका अन्य धेरै शुल्क बुझाउन विद्यार्थीलाई दबाब दिँदै आएको विद्यार्थीले बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा नोबेलले हरेक विद्यार्थीसँग ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजिरहेको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसका लागि तोकेको जम्मा शुल्क ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ हो। पाँच वर्षे कोर्षको प्रथम वर्षबापतको १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई बुझाइसकेका छन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २५, २०७८, ०२:४७:००